Sh. Shariif oo muqdisho kusoo laabtay & Qarax ka dhacay afaafka Vila Somalia – SBC
Sh. Shariif oo muqdisho kusoo laabtay & Qarax ka dhacay afaafka Vila Somalia
Posted by Webmaster on March 14, 2012 Comments
Madaxweynaha Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho xarunta dalka ka dib safar gaaban oo uu ku tagay dalka deriska ah ee Itoobiya oo uu kulamo kula soo qaatay Raiisul wasaaraha Dowladaasi.
Dr C/weli Maxamed gaas raiisul wasaaraha Dowlada KMG ah gudoomiyaha baarlamanku sheegeen in ay xilkii ka qaadeen ee Shariif Xasan Sh aadan iyo weliba Xubno isugu jira labada gole ee DKMG ah ayaa siweyn uga qeyb qaatay soo dhaweyntii loo sameeyay Madaxweynaha xiligii uu ka soo degayay geddida diyaaradaha Magaalada Muqdisho.
Ka dib soo dhaweyn madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa loo gelbiyay dhanka iyo Xarunta Madaxtooyada Vila Somaaliya.
Dhinaca kale isla wararka magaalada Muqdisho waxaa maanta Muqdisho ka dhacay Qarax ismiidaamin ah kaasi oo uu geystay nin ka tirsan Xarakada Alshabaab sida ay xarakada Alshabaab almujaahidin sheegatay.
Khasaaraha ka dhashay qaraxani ayaa noqday mid sii kordhaya iyadoo la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 5 qof halka uu dhaawacuna intaasi ka badanyahay, inkastoo saraakiil ka tirsan ciidamada Amaanka DKMG ah ay sheegayaan in khasaaraha dhacay uu intaasi ka yaryahay.
Goob aan sidaasi uga fogeyn afaafka hore ee xarunta madaxtooyada Vila Soomaaliya ayay aheyd meesha uu qaraxu ka dhacay waxaana goobta la sheegay in ay ku sugnaayeen dad ciidan iyo rayid isugu jira waana goob laga cunteeyo.
Sikastaba ha ahaatee xarakada Shabaab Almujaahidin oo qaraxa ka hadlay ayaa sheegay in qaraxaasi ay masuuliyadiisa leeyihiin islamarkaana ninka isqarxiyay uu dilay tiro badan oo ka tirsan ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya.